Cabdijabaar Sh. Axmed Sawirkaan wuxuu muujinayaa rashadaha siyaasadeed ama siyaasad-xumada waxyaabaha ka dhalan kara. Qoraalkaan waxaan ku qaada dhigayaa farqiga u dhaxeeyo mucaaradnimada iyo qarandumisnimada, waxaana ku qaada dhigayaa qodobada aan isleeyahay waa muhiim in dadkaaga ay wax ka ogadaan. Waa maxay Mucaaradnimada? Heerka mucaaradka wuu ku kala duwan yahay hadba xaaladaha siyaasadeed. Tusaale ahaan, nidaamyada kali talisnimada iyo kuwa xorta ah, mucaaradnimada waa la kala horreeyn karaa.
Xisbiyada mucaaradka, ama dadka mucaaradka ku ah dowlad dal ka talisa waa dad xambaarsan afkaar, mabaadii, aragtiyo siyaasadeed. Doorka ugu weyn ee Mucaaridku waa inay wax weydiyaan dowladda markaas jirto oo ay kula xisaabtamaan shacabka. Waxaa laga yaabaa inay jiraan muuqaalo macno leh, sida akhristayaasha ay u arki karaan markay ka fekerayaan aragtida doorka hoggaamiyaasha mucaaradka Soomaaliya.
Xisbiyada mucaaradka waxay lahaan karaan aragtiyo saameyn ku yeelan kara natiijooyinka ka dhalan kara hab-dhaqankooda. La xisaabtanka Xukuumadda Aqoonyahan Dr. Brash wuxuu leeyahay mid ka mid ah shaqooyinka ugu muhiimsan ee Mucaaradku waa inay si joogto ah wax u waydiiyaan Dowlada. Brash wuxuu leeyahay ka mid noqoshada Mucaaradka kuma koobna oo kaliya inaad mucaaraddo Dowlada. Dawladdu waxay marin u leedahay waaxaha dawladda iyo la taliyayaasha si ay u dejiyaan siyaasaddooda, halkaasoo Mucaaridku inta badan ku khasban yihiin inay maraan wadooyin kala duwan si ay u helaan macluumaad isku mid ah.
Sidoo kale waa muhiim in hogaamiyaha uu si dhaw isha ugu haayo waxa ay dadweynuhu dhahayaan ama ay ka qabaan, baahida iyo rabitaanka — maxaa yeelay waa halka ay ka heli karaan dowladda marka ay timaado olole doorasho. Wixii ku saabsan doorashada, waxaa ka mid ah ka-dhimista canshuuraha, sharciga iyo kala dambeynta, arrimaha heshiiska iyo waxbarashada.
Doorka kale ayaa ah matalaada mucaaradka munaasabadaha rasmiga ah, sida qado sharafta dowlada. Mucaaradka siyaasadeed ee dhabta ahi waa astaamaha lagama maarmaanka u ah dimuqraadiyadda, dulqaadka, iyo ku kalsoonaanta awoodda muwaadiniinta ee ay ku xallin karaan khilaafaadkooda qaab nabadeed. Jiritaanka mucaaradnimo, waxay toosisaa hab-dhaqanka dowladda waxaana halkaas ka bilaabma tartan ah in wax isla sixida ay waajib tahay. Waa maxay qaran-dumisnimada? Qaran-dumisnimada waa dad aan afkaar iyo mabaadii aan xambaarsaneen, waxaana kaalinta koowaad kaga jira warbaahinta aan tayada fiican lahayd.
Warbaahinta waa aaladaha kala duwan ee loo isticmaalo warbaahin iyo war-isgaarsiinta. Warbaahinta haddii ay noqdaan kuwa u adeega dad gaar ah oo dano gaar leh, islamarkiiba waxaa laga dareemaa xasilooni darada dalka. Sidoo kale waxay kiciyaan shacabka iyo ciidanka dalka, waa sida Soomaaliya ka taagan maalmahaan. Ciidan shaqadiisa waa illaalinta shacabka iyo qaranimada Soomaaliyeed. Ciidamada waajibaadka saaran waa inay dhexdhexaad ka noqdaan xaalada siyaasadeed ee dalka, mana loo isticmaali karo dano siyaasadeed.
Qaran-dumisnimada waxaa lagu tilmaami karaa ururo aan lahayn mabaadii iyo afkaaro oo shacabka dan u ah, kali danahooda u gaarka ah. Marka aad fiiriso siyaasada Soomaaliya ee maanta ka taagan way adag tahay inaad kala saarto cida u doodayso qabiil iyo cida u doodayso qaran. U fiirso qofka siyaasi taageeraayo wuxuu u taageerayaa waa qabiil dartiisa ee kama ahan muwaadinnimo — adigaba waad soo baari kartaa qodobkaas.
Gunaanad, ma jiro dowlad ama urur siyaasadeed oo soo koobi kara danaha bulshada oo dhan. Aniga aragtidayda sida ay ila tahay Soomaali waxay u baahan tahay dastuur ogalanaayo; iyada oo loo marayo cod aqlabiyad ah- xisbiga guuleysta, iyo gaar ahaan hogaamiyaha ay doorteen xisbiga inuu noqdo madaxweyne. Jean Jacques Rousseau , waa mid ka mid ah falsafadleyda siyaasadeed ee ugu cilmiga badnaa uguna caansanaa qarnigii 18aad.
Rousseau waxaa lagu tiriyaa inuu saameyn ku yeeshay kacaankii Faransiiska iyo gaar ahaan horumarka fikirka siyaasadeed, cilmiga bulshada iyo waxbarashada casriga ah. Xisbiyada siyaasaddu waxay tusaale u yihiin ruuxda dagaalka; u diyaar garow ficil siyaasadeed iyo iska hor imaad.
Waa wadada kaliya ee qaab ahaan loo abaabulo aragtiyaha kala duwan ee bulshada. Bulshada casriga ah, xisbiyada siyaasadeed ee mucaaradka waxay leeyihiin shaqo muhiim ah dalka iyo mustaqbalka dowladnimada ee ummad kasta. Doorka mucaaradka waa mid muhiim u ah dimuqraadiyadda wuxuuna si toos ah ula hadlayaa mustaqbalka Soomaaliya.
Mucaaridku waxay doorar kala duwan ku leeyihiin baarlamaanka, iyagoo matalaya deegaanka ay ka soo jeedaan, xagga siyaasada, horumarinta siyaasada iyo fulinta sharciyada. Facebook Comments Box.
Taasi waxa keeni kara geedkiisa oo si buuxda u kici waaya ama gebi ahaanba aan kicin. Baab dhan baannu kaga hadalnay ciniinnimada. Ha yeeshee dumarka qaar bay dhibaato kaga timaadaa rimayga.
Dumarka caynkaasi ah raggooda waxay dhakhaatiirtu ku waaniyaan inay ugu galmoodaan qaabab sahlaya in tirada ugu badan ee xawo ahi ay cambarka gasho. Qaababkaasi oo aynu hore u soo sharraxnay, waxa kamid ah inay haweeneydu u seexato dhabarka iyada oo barkimo doolasha iska gelinaysa si ay cambarka sare ugu soo qaaddo dabeetana gelitaanka geedka ninku ugu sahlanaado, taasi oo xawada gacan ku siinaysa inay si degdeg ah ku gasho ilma-galeenka.
Kolka ay galmadu dhammaato, waa inay haweeneydu muddo dhowr saacadood ah iskaga jiifto dhabarka iyada oon wax dhaqdhaqaaq ah samayn, taasi oo markaasi kahortag u ah soo laabashada xawada, fududaysana inay ilma-galeenka u gudubto. Ciriirinimada afka ilma-galeenka guud ahaan waxaa keena gabadha oon si wanaagsan u qaaangaarin ama u bislaan. Ilma-galeenka caadiga ah afkiisu waxa uu u jeedaa dhanka hoose, halkaasi oo ay xawadu ku soo shubanto kolka islaantu ay dhabarka u jiifto.
Haddiise ilma-galeenku qallooco, afkiisa ayaa ka fogaada afka cambarka, mar kasta oo qalloocaasi sii fogaadana waxaa yaraata rajada laga qabo inay xawadu gasho ilma-galeenka. Qallooca ilma-galeenku waxa uu keenaa in dhakhtar loo baahdo iyo marmar qalliin.
Haddaba haweeneyda baaridka ah aan kacsan , ilma-galeenkeedu wax dhaqdhaqaaq ah ma sameeyo, taasi oo markaasi yaraysa nuugista xawada iyo rimayga intaba. Guud ahaan madhalaysnimadu waxay noqon kartaa mid joogta ah ama mid waqti ku xiran oo ay keenaan dhibaatooyin haddii laga hor tago amaba la daweeyo laga gudbi karo.
Baab dhan baannu kaga hadalnay ciniinnimada. Ha yeeshee dumarka qaar bay dhibaato kaga timaadaa rimayga.
Kolka ay galmadu dhammaato, waa inay haweeneydu muddo dhowr saacadood ah iskaga jiifto dhabarka iyada oon wax dhaqdhaqaaq ah samayn, taasi oo markaasi kahortag u ah soo laabashada xawada, fududaysana inay ilma-galeenka u gudubto. Ciriirinimada afka ilma-galeenka guud ahaan waxaa keena gabadha oon si wanaagsan u qaaangaarin ama u bislaan. Hadii aad tahay walaal gabadhan aan ka hadalnay walaal wax isku fal oo sidan isu dhaan, hadii aad leedahay muxuu boorsda iiga buuxin suufkani ka fikir inay jiraan hablo kula mida oo sidaadan oo kale ay qabsato.
Gabadh aan ka xishoon dhiiga caadada Waa gabadh shay caadi ah uu ka yahay agteeda oo cidkasta iyo qofkastaba u sheegta marka uu ku dhaco dhiigu. Waa gabadha walaalkeed aan ka qarsan inay caadadii ku dhacday, waa gabadha u dirsata walaalkeed ama aabaheed inuu u soo iibiyo suufka ama tambooni ay isticmaali lahayd, waa gabadha musqusha markay gasho aan soo asturin tamboonigii ay iska badashay ee la soo dhexmarta reerka oo dhan ama musqushiiba kaga timid kadibna walaalkeda yar uu dhaho waa maxay waxani.
Hadal iyo dhamaantii waa gabadha aan u arag dhiigani inuu yahay shay iyada u khaasa oo aan lagala hadlin walaalahaa iyo wiilasha guud ahaanba ilaa ay dantu ku qasabto mooyaane.
Gabadha ninkeeda takoorta Gabadhani waa gabadha mooda inay tahay wax aan banaanayn dhaqan ahaan diinta maaha inuu ninkeedu ka dalbado inuu la ciyaaro wakhtiga ay caadadu hayso, waa gabadha u aragta ninkeedu inuuna xishoonayn markuu ka dalbo wakhtiga caadada waxa uu Ilaahay swt u baneeyey labadoodaba. Hadaba gabdha nidaamsata caadadeedu waa tee Waa gabadha la socota wakhtiga ay caadadu u imanayso ee isa sii diyaarisa guriga markay joogto iyo markanay jooginba, waa gaabdha boorsadeeda aan laga waayin ee markastaba diyaarka u ah inay badbaadiso hablaha aan kor ku soo sheegnay.
Waa gabadha qorta doorkasta wakhtiga uu yimaado iyo wakhtiga uu ka joogsado iyadoo isticmaalaysa buugaagteeda ama technology-ga jira wakhtiyadan sida Mobilada jira. Waa gabadha aadka ugu dadaasha inay is nadiifiso wakhtigan, waa gabadha aan sugin inay dareento qoyaan kaliya balse saacadiiba mar iska badasha tambooniga iwm.
Guud ahaan waa gabadh ku feejigan arintan caadana ka dhigatay sidii ay isu nidaamin lahayd. Dhaqanka cusub ee uu keenay qurbuhu Gabdho badan oo ku nool qurbuhu waxay caado ka dhigteen inay banaanka wax ku cunaan wakhtiga Ramadaanta, waxaad arkaysaa gabadh wanaagsan oo akhlaaq lagu yaqaano laakiin dhayalsata inay banaanka ula soo baxdo xanjo iwm wakhtiyada Ramadaanta.
Ceeb ma fiicna kuumana qalanto walaal ee iska jooji caadadan xun ee soo baxday waayahan.
Dainris on Noocyada biyaha raga